विश्वकप क्रिकेटको ट्रफी नेपालमा, किन डुलाइन्छ ट्रफी ? – Mission Khabar
विश्वकप क्रिकेटको ट्रफी नेपालमा, किन डुलाइन्छ ट्रफी ?
मिसन खबर १० कार्तिक २०७५, शनिबार ०५:५३
काठमाडौं–आईसीसी एकदिवसीय विश्वकप क्रिकेटको ट्रफी शुक्रबार नेपाल ल्याइएको छ । तीन दिनसम्म नेपाल रहने विश्वकप क्रिकेटको ट्रफी नेपालका विभिन्न स्थानमा प्रदर्शन गरिनेछ । बंगलादेश हुँदै नेपाल ल्याइएको ट्रफी साँझ स्वयम्भुमा प्रदर्शनमा राखिएको थियो ।
शनिबार पोखराको फेवाताल र पोखरा क्रिकेट रंगशालामा प्रदर्शन गरिएको ट्रफी आइतबार काठमाडौं ल्याएर चन्द्रागिरी डाँडामा प्रदर्शन गरिने छ । सोमबार बसन्तपुर दरवार स्क्वायरमा ट्रफी हेर्न पाइनेछ । ट्रफी सार्वजनिकसँगै पोखरामा नेपाली क्रिकेट खेलाडी र समर्थकसँग अन्तरक्रिया गरिदैछ भने काठमाडौंको बसन्तपुर दरवार स्क्वायरमा समेत अन्तरक्रिया हुनेछ । विश्वकप ट्रफी ओमान, अमेरिका, वेष्ट इण्डिज, श्रीलंका, पाकिस्तान र बंगलादेश हुँदै नेपाल ल्याइएको हो ।
विश्वका २१ देशका ६० शहरमा घुमाइने उक्त ट्रफी नेपालपछि भारतको ४ मुख्य शहरमा लगिनेछ । एकदिवसीय विश्वकप क्रिकेट २०१९ मे ३० देखी १४ जुलाईसम्म इङ्ल्यान्ड र वेल्समा आयोजना हुँदैछ । विश्वकप क्रिकेटको नयाँ संस्करण सुरु हुनु अघि ट्रफी प्रदर्शन गर्ने परम्परा रहदैआएको छ ।